Ku soo cesho Email tirtiray Muuqaalka - DataNumen
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair Ku soo cesho Email tirtiray Muuqaalka
Ku soo cesho Email tirtiray Muuqaalka
Tirtir iimaylka si khalad ah?
Miyaad ku qanacsan tahay galkaaga alaabada tirtiray
Lost emayllada aan dib loo heli karin?
Khaladaadka qalaad ee feylka PST?
Lost lambarka sirta ah ee faylkaaga PST?
Dhibaatooyinka soo kabashada ee Muuqaalka Muuqaalka?
DataNumen Outlook Repair si fudud ayuu u hagaajiyaa waxaas oo dhan iyo in ka badan.
Ka soo kabashada emaylka sida caadiga ah laga tirtiray Muuqaalka waa mid fudud. Marka badhanka tirtirka la riixo, emaylka ayaa dhab ahaan la geliyaa galka Waxyaabaha la tirtiray. Aadida galka waxay u saamaxaysaa emaylka in si buuxda loo akhriyo, oo si fudud ayaa loogu wareejin karaa gal kale.
Haddii, si kastaba ha noqotee, galka Waxyaabaha la tirtiray la faaruqiyo, ama haddii sheyga lagu tirtiro Ctrl-Delete (waxa ay Microsoft ku tilmaamto inuu yahay tirtir adag), emaylka ayaa laga saarayaa Outlook si joogto ah. Soo kabashada emaylka Muuqaalka ayaa markaa noqda mid aad u dhib badan.
Marka loo eego taageerada Microsoft, “… haddii aadan alaabada u rarin galka alaabta la tirtiray ka hor intaadan tirtirin, walxahaasi si adag ayaa loo tirtiray, kumana soo kaban kartid galka waxyaabaha la tirtiray.
Sida kaliya ee looga takhalusi karo e-maylka noocan oo kale ah waa adeegsiga DataNumen Outlook Repair - sameynta shaqo deg deg ah oo fudud oo xalinta dhibaatada.
Wuxuu la shaqeeyaa Muuqaalka 97, 98, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 iyo 2019.
Si buuxda u soo ceshano farriimaha boostada ee Muuqaalka, galka, posts, ballamo, codsiyo kulan, xiriiro, liisaska qeybinta, howlaha, xusuusta, joornaalada, qoraalada iyo waxyaabo kale oo badan.
Ma tirtiri karaa dhammaan emaylka ku jira Muuqaalka - ha noqdo qoraal cad, qaab RTF ama HTML ah.
Lifaaqyada boostada ee Muuqaalka ayaa si buuxda loo helay.
Waxyaabaha gundhigga ku jira ayaa si buuxda loo soo kabsaday.
Taageerada faylasha PST ee ka weyn 2 GB cabir ahaan iyo kala qaybinta faylasha PST haddii loo baahdo.
Taageero abuurista faylasha PST ee Muuqaalka 97-2002 iyo qaabka Muuqaalka 2003-2010.
Dayactirka Dufcaddii taageeray.
Looma baahna aqoon farsamo.